သင့်ရဲ့ အသားအရောင်ကို ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ? - Lifestyle Myanmar
Home Fashion သင့်ရဲ့ အသားအရောင်ကို ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ?
သင့်ရဲ့ အသားအရောင်ကို ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ?
မိန်းကလေးအများစုဟာ အဝတ်အစားဝယ်တဲ့အခါ၊ အောက်ခံမိတ်ကပ်၊ နှုတ်ခမ်းနီစတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ ဝယ်တဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အရောင်ကို ရွေးချယ်ဖို့ ခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။ အရောင်ကြိုက်လို့ ဝယ်လိုက်ပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ မလိုက်ဖက်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါက ကိုယ့်ရဲ့အသားရောင် skin Undertone ကိုမသိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အသားအရေက ဘယ် Undertone လည်းဆိုတာ သိရင် ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် အရောင်ကို အလွယ်တကူ ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ခံမိတ်ကပ်၊ ကွန်ဆီလာ၊ ပါးနီနှင့် နှုတ်ခမ်းနီအရောင်တွေကို မှားမဝယ်မိအောင် ကိုယ့်ရဲ့ skin undertone ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ?
သင့်ရဲ့ Undertone ကိုရှာဖွေရတာဟာ သင်ထင်ထားတာထက် အများကြီးလွယ်ကူပါတယ်။ ပထမဆုံး အသားရောင်ကို Cool, Warm, Neutral ဆိုပြီး သုံးမျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်ကောက်ဝက် သွေးကြောက အပြာရောင် သို့မဟုတ် ခရမ်းရောင်သန်းနေတာဆိုရင် Cool undertone ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့သွေးကြောက အစိမ်းရောင်သန်းနေတာဆိုရင် Warm undertone ဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့သွေးကြောက နှစ်မျိုးလုံးရောနေရင်တော့ neutral undertone ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့လက်က Undertone ကိုကြည့်ပြီး သင်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ မိတ်ကပ်ကို ရွေးချယ်ပါ။ သင်ဟာ neutral undertone ဖြစ်လျှင် neutral shades အောက်ခံမိတ်ကပ်အများစုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ cool undertone ဖြစ်ရင် ပန်းရောင်နည်းနည်းသန်းတဲ့ အောက်ခံမိတ်ကပ်ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ Warm undertones ဆိုရင်တော့ အဝါရောင် သို့မဟုတ် ရွေရောင်နည်းနည်းသန်းတဲ့ အောက်ခံမိတ်ကပ်ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
color-correcting concealers ရွေးချယ်တဲ့အခါ cooler undertones ရှိသူတွေဟာ မျက်ကွင်းညိုတာတွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ အဝါရောင် သို့မဟုတ် မက်မွန်ရောင် correctors ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ warmer undertones ရှိသူများဟာ အရေပြားပေါ်က မလိုလားအပ်တဲ့ အဝါကွက်တွေကို ပပျောက်ဖို့ ခရမ်းရောင် correctors ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်ဟာ ရွေ သို့မဟုတ် ငွေနဲ့ ကြည့်ကောင်းသလား?
သင့်ရဲ့ အသားအရောင်ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ နောက်တစ်နည်းက လက်ဝတ်ရတနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွေလက်ဝတ်ရတနာဆိုရင် warm undertones ရှိသူတွေနဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး ငွေလက်ဝတ်ရတနာဆိုရင် cool undertones ရှိသူတွေနဲ့ လိုက်ဖက်လေ့ရှိပါတယ်။ ရွှေနဲ့ ငွေနှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ neutral undertone ဖြစ်နိုင်ဖွယ် အများဆုံးရှိပါတယ်။
နေရောင်ထဲ ထွက်တဲ့အခါ သင့်အသားအရေဟာ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုရှိသလဲ?
သင့်အသားအရေဟာ နေရောင်ကာဆေးလိမ်းတာတောင် အလွယ်တကူနေလောင်နေရင် cool-toned အမျိုးအစားထဲမှာရှိပါတယ်။ သင့်အသားအရေဟာ အလွယ်တကူနေမလောင်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ warm-toned အမျိုးအစားပါ။ သင့်အသားအရေကို နေ့တိုင်း နေရောင်ကာဆေးလိမ်းခြင်းဖြင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပါ။
ဘယ်အရောင်နဲ့ သင်ဟာ ကြည့်ကောင်းသလဲ?
cool-toned ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အပြာရောင်၊ ပန်းရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ ပန်းခရမ်းရောင်၊ အပြာအခြေခံတဲ့ အနီရောင်နဲ့ မြစိမ်းရောင်နဲ့ ပိုပြီးလိုက်ဖက်ပါတယ်။
သင့်မှာ warm undertone အသားအရေရှိရင် အဝါရောင်၊ ရွေရောင် ၊သံလွင်ရောင်၊ အစိမ်း၊ အဝါဘက်ရောက်တဲ့ အနီရောင်(warm red)၊ လိမ္မော်၊ စတဲ့ အဝတ်အစားအရောင်တွေက သင်နဲ့ ကြည့်ကောင်းပါတယ်။
neutral undertones က အဖြူရောင်၊ မီးခိုး၊ အနက်၊ အဝါနုနှင့် အညိုရောင်ကဲ့သို့ ကြားနေအရောင်အပါအဝင် ဘယ်အရောင်နဲ့မဆို လိုက်ဖက်နိုင်ပါတယ်။
သငျ့ရဲ့ အသားအရောငျကို ဘယျလိုရှာဖှမေလဲ?
မိနျးကလေးအမြားစုဟာ အဝတျအစားဝယျတဲ့အခါ၊ အောကျခံမိတျကပျ၊ နှုတျခမျးနီစတဲ့ အလှကုနျပစ်စညျးတှေ ဝယျတဲ့အခါ ကိုယျနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ အရောငျကို ရှေးခယျြဖို့ ခကျခဲနတေတျပါတယျ။ အရောငျကွိုကျလို့ ဝယျလိုကျပမေယျ့ ကိုယျနဲ့ မလိုကျဖကျတာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါက ကိုယျ့ရဲ့အသားရောငျ skin Undertone ကိုမသိလို့ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ အသားအရကေ ဘယျ Undertone လညျးဆိုတာ သိရငျ ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျမယျ့ အရောငျကို အလှယျတကူ ရှေးခယျြနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အောကျခံမိတျကပျ၊ ကှနျဆီလာ၊ ပါးနီနှငျ့ နှုတျခမျးနီအရောငျတှကေို မှားမဝယျမိအောငျ ကိုယျ့ရဲ့ skin undertone ကိုဘယျလိုသတျမှတျမလဲ?
သငျ့ရဲ့ Undertone ကိုရှာဖှရေတာဟာ သငျထငျထားတာထကျ အမြားကွီးလှယျကူပါတယျ။ ပထမဆုံး အသားရောငျကို Cool, Warm, Neutral ဆိုပွီး သုံးမြိုး ခှဲခွားနိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့လကျကောကျဝကျ သှေးကွောက အပွာရောငျ သို့မဟုတျ ခရမျးရောငျသနျးနတောဆိုရငျ Cool undertone ဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့သှေးကွောက အစိမျးရောငျသနျးနတောဆိုရငျ Warm undertone ဖွဈပွီး သငျ့ရဲ့သှေးကွောက နှဈမြိုးလုံးရောနရေငျတော့ neutral undertone ဖွဈပါတယျ။
သငျ့ရဲ့လကျက Undertone ကိုကွညျ့ပွီး သငျနဲ့လိုကျဖကျတဲ့ မိတျကပျကို ရှေးခယျြပါ။ သငျဟာ neutral undertone ဖွဈလြှငျ neutral shades အောကျခံမိတျကပျအမြားစုကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။
သငျဟာ cool undertone ဖွဈရငျ ပနျးရောငျနညျးနညျးသနျးတဲ့ အောကျခံမိတျကပျကို ရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။ Warm undertones ဆိုရငျတော့ အဝါရောငျ သို့မဟုတျ ရှရေောငျနညျးနညျးသနျးတဲ့ အောကျခံမိတျကပျကို ရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။
color-correcting concealers ရှေးခယျြတဲ့အခါ cooler undertones ရှိသူတှဟော မကျြကှငျးညိုတာတှကေို ဖုံးကှယျဖို့ အဝါရောငျ သို့မဟုတျ မကျမှနျရောငျ correctors ကိုရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။ warmer undertones ရှိသူမြားဟာ အရပွေားပျေါက မလိုလားအပျတဲ့ အဝါကှကျတှကေို ပပြောကျဖို့ ခရမျးရောငျ correctors ကိုရှေးခယျြပါ။
သငျဟာ ရှေ သို့မဟုတျ ငှနေဲ့ ကွညျ့ကောငျးသလား?
သငျ့ရဲ့ အသားအရောငျကို ဆုံးဖွတျဖို့ နောကျတဈနညျးက လကျဝတျရတနာတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ရှလေကျဝတျရတနာဆိုရငျ warm undertones ရှိသူတှနေဲ့ လိုကျဖကျပွီး ငှလေကျဝတျရတနာဆိုရငျ cool undertones ရှိသူတှနေဲ့ လိုကျဖကျလရှေိ့ပါတယျ။ ရှနေဲ့ ငှနှေဈမြိုးစလုံးနဲ့ လိုကျတယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ neutral undertone ဖွဈနိုငျဖှယျ အမြားဆုံးရှိပါတယျ။
နရေောငျထဲ ထှကျတဲ့အခါ သငျ့အသားအရဟော ဘယျလိုတုံ့ပွနျမှုရှိသလဲ?
သငျ့အသားအရဟော နရေောငျကာဆေးလိမျးတာတောငျ အလှယျတကူနလေောငျနရေငျ cool-toned အမြိုးအစားထဲမှာရှိပါတယျ။ သငျ့အသားအရဟော အလှယျတကူနမေလောငျတတျဘူးဆိုရငျတော့ warm-toned အမြိုးအစားပါ။ သငျ့အသားအရကေို နတေို့ငျး နရေောငျကာဆေးလိမျးခွငျးဖွငျ့ ခရမျးလှနျရောငျခွညျကို ကာကှယျပါ။
ဘယျအရောငျနဲ့ သငျဟာ ကွညျ့ကောငျးသလဲ?
cool-toned ရှိတဲ့ မိနျးကလေးတှဟော အပွာရောငျ၊ ပနျးရောငျ၊ ခရမျးရောငျ၊ ပနျးခရမျးရောငျ၊ အပွာအခွခေံတဲ့ အနီရောငျနဲ့ မွစိမျးရောငျနဲ့ ပိုပွီးလိုကျဖကျပါတယျ။
သငျ့မှာ warm undertone အသားအရရှေိရငျ အဝါရောငျ၊ ရှရေောငျ ၊သံလှငျရောငျ၊ အစိမျး၊ အဝါဘကျရောကျတဲ့ အနီရောငျ(warm red)၊ လိမ်မျော၊ စတဲ့ အဝတျအစားအရောငျတှကေ သငျနဲ့ ကွညျ့ကောငျးပါတယျ။ neutral undertones က အဖွူရောငျ၊ မီးခိုး၊ အနကျ၊ အဝါနုနှငျ့ အညိုရောငျကဲ့သို့ ကွားနအေရောငျအပါအဝငျ ဘယျအရောငျနဲ့မဆို လိုကျဖကျနိုငျပါတယျ။
Previous articleပေါင်တံမှာရှိတဲ့ အဆီပိုတွေကို သဘာဝအတိုင်းဖယ်ရှားဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း
Next articleဖိနပ်အပါးလေးတွေစီးရင် လိုက်ဖက်မယ့် ဝတ်စုံလေးတွေ